Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 18, 2018 | Kuvandudza wega
Pasinei nokuti iwe uri mutungamiri weboka kana mushandi, kuyananisa hupenyu hwehupenyu nehupenzi pasina mubvunzo chimwe chezvinangwa zvako zvemazuva mazhinji. Zvinhu izvi zviviri zvakabatana zvakanyanya uye zvinogona kukurudzirana zvakanaka kana zvisina kunaka zvichienderana neunyanzvi hwako mumunda. Kuti urege kudzivirirwa kana kupiswa, heano mamwe mazano anobatsira okuyananisa zvachose.
Dzidza kuti NO
Munguva inotevera nguva yezororo, kana iwe usingaendi uye waunoshanda naye anokukumbira kuti uite mamwe mabasa, kunze kwekugara kwako, taura kwete. Zvechokwadi, hapana chikonzero pakuwedzera kune yako yakatowedzera kuwandisa purogiramu. Izvi hazvirevi, zvisinei, kurega kubatana. Zvose zvinoenderana nebasa rako remazuva ose, asi zviri nani kuramba kana iwe uchinzwa kuti chikumbiro chaunoshanda naye chakashata.
Sezvatinogara tichinzwa, zvinotora mavhareji emaawa ekurara kwe8 kuti muviri uwanezve, nguva dzose edza kuremekedza nguva iyi. Zvechokwadi, kunyange kana iwe uchiona kubata kwako usiku sehuwandu hwekutsvaga muhupenyu hwako hwehutano, yeuka kuti hazvina maturo kana wakaneta zvikuru kuti usapinda kunoshanda zvakanaka. Ipa muviri wako nepfungwa nguva yekuzorora.
Siya basa muhofisi
Dzidza kusiyanisa imba yako kubva kubasa rako. Chikonzero ndechekuti iwe une nguva yako yose mangwana kuti uenderere mberi zvausingagoni kuita nhasi. Rega kushanda mushure mekudya kwemanheru kana usati waenda kunorara. Zvakafanana nokutora basa rechikoro raunopiwa kumudzidzisi wako mangwanani anotevera kana zvisiri zvechokwadi.
Kana iwe uchifanira kupfuurira, unoda kugara hafu yeawa zvakare pane dawati rako. Kana zvisina kudaro, dzivisa kuedzwa kuti uverenge emaimeri yako kana chengeta basa rako nekudzima bhizinesi rako rebhizimisi. Iwe unogona kusiya mafaira ako nekombiyuta yako muhofisi yako. Pane kuwedzera mune unyanzvi hwako uye sangano rakanaka.
Rongedza mabasa kunze kwebasa
Zvingave sendima yegaga, kana awa yekuita basa mumuviri wekurovedza muviri, nzira dzose dzaunokwanisa kusunungura dzakanaka. Izvi zvinonyanya kudaro kana zvichiita kuti uwedzere kufambira mberi kwako. Semuenzaniso, shandisa manheru ako neshamwari yako, yakwegura kana itsva, chinhu chose ndechokukwanisa kuvandudza kunyaradzwa kwako kwehupenyu hwezuva nezuva. Kushandisa manheru pamberi pe terevhizheni nemhuri yake zvakare inzira yakanaka yekuzorora.
Zvipe iwe mapuropa
Zvakaoma kuramba uine pfungwa kana nguva dzose muhumiro hwakanakisisa kubva mangwanani kusvika usiku pasina kuparara. Izvi zvinokubvumira kuti usunungure, tora nguva yekudya chibereko, kunwa mvura kana kuenda kunotora mhepo itsva. Chinangwa chacho ndechokunakidza kubva pakombiyuta yako, mutengi wako kana kutaurirana kusingaperi.
Ronga basa rako maererano nePareto principle
Izvi zvinoreva kuti zvichienderana nemabatiro aunozviita, 20% yemabasa aunoita anogona kupa 80% yemhedzisiro yaunoda. Aya mabasa anokodzera sehurongwa zvine hungwaru sezvo iwo ane akakwirira akawedzera kukosha. Saka kana iwe uri munhu wemangwanani, sarudza kuzadzisa iyi 20% pakutanga kwezuva woisa kumashure makumi masere makumi masere muzana mushure mekuzorora kwemasikati.
Ivawo kudzivisa kuparadza nguva pamabasa asina kubudirira. Kuronga misangano kumire kuchakubatsira kuti urege kugadzirisa kutaura nguva dzinonyanya kukosha nyaya uye pfungwa. Shandisa mishumo yevhiki nevhiki kana zvimwe zvekutaurirana mukati kuti usapinda misangano yese yekambani. Ita zvaunogona kuti uwane zvinyorwa zvose zvese zvaunoda mubasa rako.
Aya mazano achakubvumira kuti upedze mabasa ezuva kare uye uende mberi, izvo zvinoratidza kuti zvinobudirira. Isu tinogara tine rugare rukuru rwepfungwa apo zvinyorwa zvedu zvakasvika.
Usanonoka kukumbira shamwari kune mazano
Iwe unogona zvakare, sei uchizvidzivirira iwe, bvunza mazano pamusoro pehurukuro kune mumwe wehama dzako uyo anooneka zviri nani kuenzanisa pakati pebasa rake uye hupenyu hwake hwehutano. Zviri nani pane kukurudzirwa nemumwe mutorwa asingazivi chinhu nezvehupenyu hwako uye iyo mabasa ayo anogona kukwaniswa pamutengo mukuru.
Zvipe iwe nguva yekuputsa tsika yezuva nezuva uye kutora zvimwe mazuva aripo. Tora mukana wekuronga tsika kana tsika dzisinganzwisisiki sezvaunoona zvakakodzera. Uyewo tora mukana uyu wekushanyira mhuri yako kuvhara kana shamwari dziri kure. Nemamwe mazwi, inguva yakakwana yekupedzisa mapurogiramu ausingawanzokwanise kubudirira.
Kana kuenda nekukasira zvisingaite, ziva kuti kuwedzera vhiki yako yezuva nezuva kunobatsira sekuzorora kwevhiki. Zvakare, zviitiko zvinoverengeka zvinonakidza zvinogona kuitwa mukati memazuva matatu ekuzorora.
Shandisai mamwe mabasa enyu
Ipa mudzidzi wako kana mumwe wevamwe vako mukana wokuwedzera unyanzvi hwavo uye ruzivo kuburikidza nekudzidzira nekupa kwavari mamwe mabasa anobatsira. Kune rumwe rutivi, kutarisira mumwe munhu kuti akubatsire mune mamwe mabasa zvinoreva kusatevedzera kwakanaka kwekuitwa kwebasa rakakumbirwa. Basa risina kuitwa nemunhu anofanirwa kunge akadzidziswa newe richava nemigumisiro.
Zvinogona kuitika kana zvakakokodzera iwe kutaurirana kuti uite chimwe chebasa rako kubva kumba kwemazuva mashoma, kunze kwekuti boka rako risingatauri kuipa kupi zvako. Iyi nzira yebasa inobatsira kana iwe uchida kupedza nguva yakawanda kumba. Asi kuitira kuti kushanda kwebhizimisi kurege kukwana kuburikidza nekushaiwa kwako kwepanyama, iwe unofanira kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka.
Varume nevakadzi zvakafanana vanotsvaga chiyero chakakwana pakati pehupenyu hwega nehunyanzvi. Izvo zvinokwanisika kubata rako basa uye hupenyu hwemhuri, zvisinei pane dzimwe nguva sarudzo dzinofanira kuitwa. Iwe saka unofanirwa kukoshesa chikamu chemhuri nekushanda zvishoma, semuenzaniso, kuti utarisire hupenyu hwako hwega zvishoma. Kana iwe uchapa yakawanda nguva kune yako yehunyanzvi basa nekusiya yako pachako hupenyu zvishoma. Chero nzira, zvirinani kana aya sarudzo ari mhedzisiro yekuratidzira pane kuti urairirwe iwe nemamiriro asingadzoreke.
Tsvaga muganhu pakati pehupenyu hwehupenyu uye hwehutano November 25th, 2018Tranquillus
zvinoteveraNzira yekugutsikana sei mune unyanzvi hwokugadzirira?
Sei uchifanira kubuda muhukuru?